Sawirada qalin-jebinta ah ee dhabta ah ee Monica Lee | Abuurista khadka tooska ah
Eray la'aan qofku wuxuu joogaa daqiiqada uu arko sawirada markii ugu horeysay hyperrealistic oo ka socda fannaanka lagu magacaabo Monica Lee.
Kaliya mid aad horey ujoogtay aamusnaan wareersan fiirinaya mid kasta oo ka mid ah faahfaahinta, si ay hadhow ugu malayso in lagu sameeyay qalin iyo in si la yaab leh loo abuuray shuqullo. Xusid mudan in lagala wadaago halkaan halkan Creativos Online.
In kasta oo ay jiri karaan nacayb ku adkeysanaya in aysan jeclayn shaqooyinka fanaaniinta oo nuqul ka sameeya sawir taasina way fududaan kartaa. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ogaato in ka soo qaadashada male-awaalka ay had iyo jeer yeelan karto faa iidada aan la garanaynin khaladaadka uu abuurahu sameeyay, iyadoo loo marayo xaashi ama shiraac waxa dhabta ah ee aan imaan karin guul darrooyin la'aan, Waa waxa jira, la'aan suurtogalnimada in la ikhtiraaco ama la qiyaaso indho ka weyn, ama in sadarka indhaha si sidan oo kale ah lagu muujiyo.
Iyo Monica Lee kama hadlayno hal ama dhowr shaqo taasi waa wax fiican, laakiin haddii aad u dhowaato uu instagram, waad sii wadi kartaa in lagaa tago wejigaas la yaaban ee quruxda farshaxankiisa iyo xiisaha uu u hayo qalinka madoow iyo caddaan intaba saddexda faasas ee mudnaanta u leh.
Adag dooro mid badan, laakiin haddii aan mid sii joogo, waxay noqon laheyd gabadha aan halkaan kula wadaago, oo si fudud u cajaa'ib leh. Heerka faahfaahinta, adeegsiga hooska, khadka, taasi waa, wax walba waa sarreeyaan. Farshaxaniiste reer Malaysia ah oo raacaya isla markaana leh xirfad dheer oo iyada ka horraysa iyo hadiyado dulqaad iyo karti u leh sawir qaadista oo hubaal sii wadi doonta isbeddelkeeda.
Waxaan idhi, ha qaadan waqti dheer inaad raacdo barta Instagram maaddaama uu sida caadiga ah ka bilaabo shaqooyinkiisa shabakaddan bulsheed ee sida weyn ugu habboon fanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawirada qalin-ku-saleysan ee dhabta ah ee Monica Lee